တရားဝင် "ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း" အဖြစ်လူသိများသောရုရှားက Eurasia တွင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာကမ္ဘာမြေရဲ့စည်ပင်မြေယာဧရိယာ၏ 6.5 / 17 ဖုံးအုပ်ကမ္ဘာပေါ်မှာသန်း 1 ကျော်စတုရန်းမိုင် (8 သန်းစတုရန်းကီလိုမီတာ) နှင့်အတူအကြီးဆုံးမြေဧရိယာရှိပါတယ်။ သန်း 145 ကျော်လူဦးက၎င်း၏လူဦးရေကမ်ဘာပျေါတှငျ 9th အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မော်စကို, ရုရှားရဲ့မြို့တော်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။
ရုရှားတွင် corporate ဥပဒေပြဌာန်းရုရှားစီးပွားဖြစ်ပညတ်တရားအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းသည်။ ဤပညတ်တရားကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်များများအတွက်အမျိုးမျိုးသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေး, ကော်ပိုရိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုထိန်းညှိ။ ဒါဟာအစစတော့ရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထဲမှာအလုပ်လုပ်ပုံကိုထိန်းညှိ ပြည်.
ရုရှားပူးတွဲစတော့အိတ် Corporation (JSC) အဓိကအားရုရှားကစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကိုဖွဲ့စည်းကြသည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းရှာနေနိုင်ငံခြားသားများ၎င်း၏အမည်ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌က "OOO" သင်္ကေတများနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ကိုဖွဲ့စည်းရန်အကြံပြုပါသည်။ ရုရှား PLC ကကုမ္ပဏီ၏စင်းလုံးငှားပြောင်းလဲပစ်ရန်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များအတွက်ပုံမှန် JSC ထက်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသောရှယ်ယာထုတ်ပေးမှမရှိပါ။ ထို့အပြင်တစ်ဦး PLC က၎င်း၏စင်းလုံးငှားမြို့တော်ထဲမှာနိမ့်ဆုံး 10% အတိုးကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး JSC ကျော်နောက်ထပ်အားသာချက်ကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးထုတ်ပယ်နိုင်ရန်အတွက်တရားဝင်တရားစွဲဆိုမှု file ဖို့ရှိသည်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။
တစ်ဦးကရုရှားပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) တို့ပါဝင်သည်ရာအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ငျြးပွညျ့မီ:
• တစ်ဦး LLC ဆင်တူ: ရုရှား PLC အဖွဲ့ဝင်များတစ်ဦးချင်းစီကုမ္ပဏီ၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်မရှိကြပေ။ ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကသာကုမ္ပဏီ၏စင်းလုံးငှားအတွက်ထွက် set ပါဝင်မှုတန်ဖိုးပမာဏအဘို့အထိုက်ဖြစ်ကြသည်။
• တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ဆိုင်မှု: အခွန်ဆိပ်နိုင်ငံများတွင်အများအပြားကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းကဲ့သို့ပင်လူတစ်ဦး၏တစ်ဦးအနည်းဆုံးရုရှားတွင်တစ် PLC ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။ တစ်ဦးကနိုင်ငံခြားကော်ပိုရေးရှင်းလည်းရုရှား PLC ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါသည်အစုရှယ်ယာ: တစ်ဦးက PLC ဒီ entity တစ်ခု JSC ထက်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသောရှယ်ယာထုတ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
• ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များ: ရှယ်ယာရှင်များအမည်စာရင်းတင်သွင်းခန့်အပ်နိုင်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
• လွယ်ကူသော Withdrawal: အဆိုပါ PLC စင်းလုံးငှားခွင့်ပြုပါက, အဖွဲ့ဝင်များသည့်အချိန်တွင်မဆိုရုပ်သိမ်းပေးရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုညီမျှလိုလားသူ rata ရှယ်ယာခံယူနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကရုရှား PLC အခြားမည်သည့် PLC သို့မဟုတ် JSC မှအလားတူမထူးခြားတဲ့အမည်အားရွေးချယ်ရမည်။ အဆိုပါ "OOO" ဟုနိုင်ငံခြားဘာသာစကားအဆိုပါ PLC နာမအဘို့ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက Russian သို့ဘာသာပြန်ထားသောရပါမည်သည့် PLC အမည်နှင့်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. များ၏ရှေ့မှောက်၌ပေါ်လာရကြမည်။ နှစ်ဦးစလုံးနာမည် PLC ကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် name ကိုမသုံးနိုင်သည်
ရုရှားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် PLC ရဲ့ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်တစ်ဦးကဒေသခံရုံးလိပ်စာနှစ်ခုလုံးရှိရမည်။ ဤသည်မှာလိပ်စာဖြစ်စဉ်ကိုဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုများနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးချက်များအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
အဆိုပါ PLC ရှယ်ယာထုတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဆိုလျှင်, အနည်းဆုံးရှယ်ယာရှင်အဲဒီမှာဖြစ်ရမည်။ ရုရှားကမ်းလွန် PLCs ထက်ပိုငါးဆယ်အဖွဲ့ဝင်များရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။
ရုရှားကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် PLC ရဲ့အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။
ရုရှား PLCs နှစ်ဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အဆိုပါ Two-အလွှာနေသောခေါင်းစဉ်:
အများဆုံးတန်ခိုးနှင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ပြုမူရာ (1) ကအထွေထွေသင်တန်းသားများ '' အစည်းအဝေး, ။ တစ်ဦးတည်းအထွေထွေသင်တန်းသားများ '' အစည်းအဝေးကုမ္ပဏီစင်းလုံးငှားပြင်ဆင်ရန်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
(2) ကို PLC ၏အလုပ်အမှုဆောင်ခန္ဓာကိုယ်။ အဆိုပါ PLC ၏အလုပ်အမှုဆောင်ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါအလုပ်အမှုဆောင်ခန္ဓာကိုယ်ကုမ္ပဏီ၏နေ့-to-နေ့ကလှုပ်ရှားမှုများ run ဖို့မျှော်လင့်ရသည်စသည်တို့ကို, အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး၏ဖွင့်စေတော်မူသည်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် "ဟု The လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများ on" ဖက်ဒရယ်ဥပဒေတစ် PLC ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကိုခနျ့အပျဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းသည်ဆိုပါကကုမ္ပဏီရဲ့ယေဘုယျလှုပ်ရှားမှုများကြီးကြပ်ရပါမည်။
တစ်ဦးကရုရှား PLC RUR 10,000 (အမေရိကန် $ တစ်ဦးကိုနှစ်စဉ်ကြေးပေးဆောင်ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ330).
ဒီမြို့တော်၏ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုကုမ္ပဏီတစ်ခု PLC ဖြစ်လာမှဖိုင်များကိုရက်စွဲအပေါ်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ရုရှား၌အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်နှုန်းကို 20% ဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှား PLC များအတွက်နှစ်ပတ်လည်မှတ်ပုံတင်ရေး 2,000 ရူဘယ် ($ 70 အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ကုန်ကျသည်။ အခြားအနှစ်စဉ်ကြေးကိုလည်းကုမ္ပဏီ၏တံဆိပျ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်များသောအားဖြင့်အကြောင်းကို $ 80 အမေရိကန်ဒေါ်လာကုန်ကျသည့်စာရင်းအင်းများအတွက်ပြည်နယ်ကော်မတီမှာမှတ်ပုံတင်လည်းပါဝင်သည်သောသက်ဆိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကရုရှား PLC ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်စပ်လျဉ်းကော်ပိုရိတ်မှတ်တမ်းများအများပြည်သူပွင့်လင်းစေခြင်းငှါသတိပြုမိဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော် privacy ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အဘို့, ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များအသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်။
15 ထက်ပိုသင်တန်းသားများကိုကုမ္ပဏီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တက်စေသည့်အခါရုရှား PLCs ပြည်တွင်းရေးစာရင်းစစ်သာလိုအပ်သည်။
တစ်ဦးကရုရှား PLC အဆိုပါ PLC ထိန်းချုပ်ဖို့ပါဝါကိုထိန်းသိမ်းထားရာက၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးကျင်းပရန်လိုအပ်ပါသည်။ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကာလအတွင်းအဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီစင်းလုံးငှားပြင်ဆင်ရန်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ရုရှား၌တစ်ဦး PLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံးအထိကြာနိုင်ပါတယ်။ ဤသည် turnaround အချိန် name ကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်ကော်ပိုရိတ်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပြည့်စုံနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်ရုရှားကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းလိုသောနိုင်ငံခြားသားများအစားပုံမှန် Joint Stock ကော်ပိုရေးရှင်း (JSC) ၏ရုရှားပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (PLC) ကို set up ရန်အကြံပြုပါသည်။ တစ်ဦး LLC ကဲ့သို့တူညီသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရှိခြင်း, လူတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်မှုမရှိလိုအပ်သောရှယ်ယာအဖြစ်လျာထားသောရှယ်ယာရှင်များနှင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှလွယ်ကူသောဆုတ်ခွာ: တစ်ဦးကရုရှား PLC အပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ်။